KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Maleeshiyaadka Al-Shabaab oo sheegay inay diyaariyeen Haween isqarxisa
Wednesday 5 December 2012 12:05
Maleeshiyaadka Al-Shabaab oo sheegay inay diyaariyeen Haween isqarxisa
Moqadisho (KON) - Maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ayaa sheegay in ay diyaariyeen Haween Soomaaliyeed oo haatan diyaar u ah in ay isqarxiyaan oo ay geestaan khasaaro badan.
Wakiilka Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan Sheekh Yuusuf Cali Ugaas ayaa sheegay in ay haatan joogaan Haween badan oo doonaya in ay isqarxiyaan kuwaasi oo xigaan u diyaarsan in ay howlgalo sameeyaan.
Isaga oo ka hadlayay degmada Buula-Barde ee gobolka Hiiraan ayuu sheegay in Al-shabaab dagaalka ay wadaan ay ka qeyb qaadanayaan haweenka ku dhaqan gobolka Hiiraan.
Gudoomiyaha maleeshiyaadka Al-Shabaab ee gobalka Hiiraan Sheekh Yuusuf ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in Haweenkaan ay dhaqaalohoodii ay ku wareejiyeen Al-Shabaab Naftoodana haatan ay diyaar la yihiin.
Arintaan ayaa waxay qayb ka tahay falalka ay Al-Shabaab ku qaldayaan haweenka iyo waliba caruurta Soomaaliyeed oo ay ugu adeegsanayaan dagaalada ay ka wadaan Soomaaliya.